Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Ubudala beZero-Emission Aviation Startups
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Technology
Ngokukhula kwengqwalaselo kuwo onke amashishini ukwenza utshintsho lwemozulu kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwe-CO2 kwihlabathi liphela, amandla abadlali abatsha kubuchwephesha beenqwelomoya awukaze ube mkhulu.
Ngotshintsho lwemozulu oluqhubekayo, amanyathelo acwangcisiweyo ngoku ngumzi-mveliso wenqwelomoya awonelanga. Isifundo esitsha iimephu ezingama-40 ezithembisayo zokuqalisa kwicandelo elitsha lokuhamba ngenqwelomoya.
Amagqabantshintshi ngo iimephu zeAero ezizinzileyo Iziqalo ezingama-40 ezithembisayo, Ukuhlanganisa ukuqhuba ngenqwelomoya ngokuzinzileyo kumacandelo amane obuchwephesha: iiFutha zoQeqesho oluZinzileyo (SAF), iPropulsion yoMbane, iHydrogen, kunye neDijithali yomqolo.
Ikwajonga notyalo-mali lwentengiso kwihlabathi liphela kubuchwephesha bokukhupha ubuchwephesha, intsimi ethe yafumana ukubambeka okubonakalayo kule minyaka mithandathu idlulileyo, kodwa ukuza kuthi ga ngoku bekuneentloni ukunxibelelana necandelo lokuhamba ngenqwelomoya, ngakumbi xa kufikwa kumacandelo anzima njengehydrogen .
I-Aero Lab ezinzileyo ijolise ekukhawuleziseni ukuqala kwaye ibikukucebisa ukuqala kwindawo nganye echazwe kolu phando ukusukela oko yasungulwa ngoFebruwari 2021. Ezinye zeengcali ezibalaseleyo ezivela kuwo onke amacandelo ezokundiza sele zijoyine njengabacebisi.
UStephan Uhrenbacher, umseki kunye ne-CEO yeLebhu yeAero ezinzileyo: “Abaqalayo abafumana olona qeqesho kwi-aerospace kutshanje bebesenza uhambo lokuhamba emajukujukwini kunye neeteksi zomoya zasedolophini. Ngelixa ezi mveliso zenzela ukuphuma kwezinto ezindizayo kwaye ziyanelisa umnqweno wabantu, iiteksi zomoya okanye ukubeka abantu abaninzi emajukujukwini kusombulula ingxaki ejongene nokuhamba ngenqwelomoya: Ukubhabha kufuneka kungabikho khabhoni. Kwaye oku kufuneka kwenzeke ngokukhawuleza okukhulu kunokuba uninzi lwabantu kumzi-mveliso lukholelwa. Ivula indawo yokuqalisa ukubonelela ngeenqwelo moya ezizayo okanye zonke iinqwelomoya, kodwa kunye neendlela ezintsha zokusebenza. ”
“Ukubhabha ngenqwelomoya kubhabha ngqo kungxaki yemozulu. Okwangoku uninzi lweshishini lujolise ekunciphiseni ngokwandayo okanye ekususeni ukukhutshwa, kunokuba kubasuse ngokupheleleyo. Akukho xesha lishiyekileyo lokuthatha le ndlela yokunyusa; Iziphumo zotshintsho lwemozulu ziya zibonakala kwaye zichaphazela ubomi bethu bemihla ngemihla. Sifuna izisombululo ezinesibindi ezinokuhambisa ukhenketho lomoya olungahambisiyo kule minyaka ilishumi izayo ukuba sinalo ithemba lokufikelela kwiinjongo zesiVumelwano saseParis. Iindaba ezimnandi zezokuba izisombululo zikhona kwaye zibonisa ithuba elikhulu lokuthengisa, ” Utsho uPaul Eremenko, u-CEO kunye nomseki-mbumba we-Universal Hydrogen, kunye nomcebisi kwiLebhu ye-Aero ezinzileyo. Ngokuqala kwakhe, i-Universal Hydrogen, i-CTO yangaphambili ye-Airbus kunye ne-United Technologies idlala indima ebonakalayo phambili kulo msebenzi ngokwakhe.
Unga Fumana lonke isifundo yiLebhu yeAero ezinzileyo, kubandakanya nemephu yokuqalisa kunye nohlalutyo lotyalo-mali lwentengiso kwitekhnoloji yokuphuma, kwiwebhusayithi yeLebhu www.zinzile.aero.
Iinqwelomoya zase Mzantsi-ntshona zithi imisebenzi yokuhamba ngenqwelo moya eJamaica ...
UKhenketho lwaseSeychelles kunye neClub Med Yongeza indawo ekuyiwa kuyo...
I-Qatar Airways ibuyisa ii-A380 zayo zasebusika...
I-IMEX America iyonwabile kukuba i-US inciphisa uKhenketho ...
I-Jamaica ngoku ibeka iindawo zayo zoKhenketho kwiGastronomy
I-Columbia China Ivula iSibhedlele sesithathu esitsha kunye nesona sikhulu kwi...
UMphathiswa: Wonke umntu waseJamani uya kugonywa, aphiliswe okanye...
Iimbadada kunye neeNdawo ekuchithelwa kuzo iiholide zoPhumelela iMagazini eNtsha yokuDiva eli-13...
Imiba emitsha ephambili yokuphatha: Ukunqongophala kwabasebenzi...
Ukufika kweendwendwe zaseHawaii kunye nenkcitho yayiphantsi ...
2022 Honda Passport rally iinkuphelostencils ukukhuphisana American ...
Ezona zixeko zibalaseleyo zehlabathi zobugcisa basezitalatweni - ukusuka eNtsha...
I-IMEX America Ivula eLas Vegas ngochulumanco olukhulu
I-Honolulu iya eSydney: Indlela entsha yokubhabha iinqwelo moya zaseHawaii
Umboniso omtsha ohlekisa ngenkokeli yaseTshayina uXi Jinping uvula...
IJapan ngoku ivaliwe kubo bonke ngaphandle kwabemi
Ugonyo olutsha lwe-COVID-19 oluphuhliswe eTshayina luFumana...
UKhenketho lwaseJamaica lubambe iiNtetho zoTyalo-mali oluBalulekileyo kwiCruise
Abantu abangama-41 babulawa, uninzi lwalahleka e-India ...
Isibini esibaleka ukuvalelwa komntu omtsha waseDatshi sibanjwe ...
UBartlett kwiiNtetho kunye neenqwelomoya ze-Emirates ukwazisa...
Amazwe amaninzi anqumamisa iinqwelomoya zamazwe ngamazwe ngaphezulu kwentsha...
I-Omicron ngoku ise-United States: Ingqinwe yi-CDC
eTurboNews ligama elibi lokuphawula: Nantsi isizathu
I-Airbus: Uphononongo olutsha lwe-100% lwezibaso ezizinzileyo...
Umthetho omtsha we-EU uza kuthintela abatyeleli abangagonywanga...
Indiza entsha yeBoeing 777-9 ibhabha isiya eDoha International...
Yintoni iGosa eliyiNtloko loMsebenzi? 52 Iindawo zokuchithela iiholide zaseWyndham...
I-IMEX yaseMelika sisiganeko sokuqala samazwe ngamazwe ukuvula...
Isitofu sokugonya saseRussia iSputnik V ngoku samkelwe ukuba kungene u-Israel
Ukuphulukana nomzi mveliso wenqwelomoya ngenqwelomoya ephezulu kwi-200 yezigidigidi ngo-2020 ...
I-China Eastern Airlines iza kubamba i-2022 IATA AGM kwi ...
Isebe laseMelika libongoza abantu baseMelika ukuba bayishiye iHaiti ngoku
UNyulo lokutshintsha umdlalo we-UNWTO: Luza kusebenza njani ngoku?